I-Villa Inah - I-2 Bedroom Waterfront Luxury Villa
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Lena Company
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Lena Company izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Villa Inah iyivillade esanda kulungiswa etholakala eSouth Finger enhle eJolly Harbour. I-Villa Inah inomklamo wesimanje wolwandle onamafasitela amakhulu neminyango eshiya i-villa igqamile futhi inomoya. Idizayini yesimanje ye-villa ikunikeza ukuphumula okuhle kakhulu kokuhlala kwakho e-Antigua.
Isitezi sokuqala seVilla Inah sinekhishi negumbi lokuhlala elinomqondo ovulekile wepulani oholela emphemeni. Ikhishi linamakhabethe esimanje amhlophe futhi lifakwe izinto zensimbi ezingenasici ezisezingeni eliphezulu. I-villa ifakwe nemishini ye-Nespresso yabathandi bekhofi! Igumbi lokuhlala linosofa onethezekile kanye ne-tv engu-55” ubusuku obuphelele. Ungakhetha ukudlela ngaphakathi kwe-villa noma ngaphandle edekhini ebheke emanzini.
Ngemuva kosuku olumatasa lokubuka indawo noma ukuhlala ogwini lolwandle, hlala phansi uye kumagumbi akho okulala avulekile nanomoya. Igumbi lokulala elikhulu linombhede olingana nenkosi enegumbi lokugezela le-ensuite. Igumbi lesibili lokulala linemibhede emibili egcwele futhi enegumbi lokugezela le-en-suite. Igumbi lokugezela ngalinye linezindawo zesimanje ezinezihlambi zemvula. Wonke amagumbi ane-air conditioner anamafeni osilingi alawulwa kude.
4.95(44 okushiwo abanye)
Ibungazwe ngu-Lena Company
ULena Company Ungumbungazi ovelele